बैदेशिक रोजगारमा रहेकालाइ उपयोगी ‘मुगलान’ एप सार्वजनिक - Living with ICT
Home / Featured / बैदेशिक रोजगारमा रहेकालाइ उपयोगी ‘मुगलान’ एप सार्वजनिक
बैदेशिक रोजगारमा रहेकालाइ उपयोगी ‘मुगलान’ एप सार्वजनिक
Admin Mar 25, 2017	Leaveacomment
बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले अब मोबाइलबाटै गुनासो र आफ्ना समस्या वा उजुरी सम्बन्धित निकायलाई राख्न पाउने भएका छन् । बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको समस्याको पहिचान गरि उक्त समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा शीर्घ पहल गर्न उपयोगी ‘मुगलान’ एप सार्वजनिक गरिएको छ ।
मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजित गैर आवासीय नेपाली संघको एसिया प्रशान्त सम्मेलनको अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले उक्त एपको सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैदेशिक रोजगारीको बेथिती न्युनीकरण गर्न र कामदारको समस्या वा गुनासो पहिल्याउने एवं सम्बन्धित निकाय एवं संस्थाहरुको सहयोगमा समस्याको सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उक्त एप तयार पारिएको मुगलानका संस्थापक पत्रकार रामचन्द्र गिरीले जानकारी दिए ।
“विगत ७ बर्षअघिदेखि एकजना आप्रवासीका रुपमा रहँदा मैले कयौं हाम्रा नेपालीहरुका अनेक खाले समस्याहरु देखें,भेटें ।” पत्रकार गिरीले भने ‘कतिपय समस्याहरु सामान्य जानकारी अभावमा सृजना हुने र कतिपय चाँही सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने एवं पुगेपनि त्यस्ता निकायले ध्यान दिएको पाइएन ।” उनले थपे “त्यसैले समस्याहरु, गुनासोहरु संकलन गर्ने र प्राप्त हुनेवित्तिकै सम्बन्धित निकायलाई दिने र हरसम्भव फलोअप गर्दै जाने उद्देश्यले मुगलानको निर्माण गरिएको हो ।”
सूचना प्रविधि विषयका विद्यार्थीसमेत रहेका गिरीका अनुसार मुगलान एपमार्फत प्रयोगकर्ताले आफ्ना उजुरी आवयश्कताअनुसार विवरणसहित पठाउन सक्नेछन् । ती जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित देशमा रहेका दुतावासलाई सिधै फरवार्ड गरिन्छ र दुतावासको समन्वयमा समाधानमा पहल समेत गरिन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीहरुका लागि यो एप निकै उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।
एपमा बैदेशि क रोजगारी लगायतका विभिन्न ताजा समाचार, करिब ३ दर्जन देशहरुमा रहेका नेपाली दुतावासका ठेगाना, सेवा तथा जानकारी, हेल्पलाइन नम्बरहरु, सहयोगी संघसंस्थाका फोन, ईमेल, नीति तथा नियम, लोकेशन म्याप, ईभेन्ट, राशीफल, विनिमय दरभाउ लगायत धेरै जानकारी राखीएको छ ।
दुतावासहरुलाई फरवार्ड गरिएको गुनासोहरुको सम्बोधन नभएमा अन्य निकाय एवं संघसंस्थासँग समन्वय गरिनेसमेत संस्थापक गिरीले बताए । “हामीले समन्वय गर्ने निकायबाट पनि समस्या समाधानमा गम्भिरता देखाएनन् भने त्यसबारे अन्य संघसंस्थासँगको सहकार्यमा अघि बढ्ने र सार्वजनिक अपिल नै गर्न सकीन्छ ।”
सार्वजनिक गरिएको एक सातामै झण्डै हजार जनाले यो एप डाउनलोड गरिसकेका छन् । डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
muglan app 2017-03-25
Previous काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले सुरु गर्यो निःशुल्क ‘ओपन अनलाइन कोर्स’
Next कुन एप्समा पर्मिसन छ वा छैन, कसरि नियन्त्रण गर्ने